संचालित — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
तपाईं पनि Lil वेन जस्तै कलाकार कुरा सकेन. त्यहाँ बस प्रसिद्ध हुन र पैसा बनाउन चाहने केही Rappers छन्. छैन Lil वेन. उहाँले सबै समय को सबैभन्दा ठूलो हुन चाहन्छ. उसले खान्छ, सोता, र आफ्नो संगीत breathes. उहाँले सुन्नुहुन्छ. उहाँले स्टूडियो बसोबास. सबैभन्दा Rappers लिखित छ भन्दा उहाँले शायद थप राइम्स भूल गर्नुपर्छ. आफ्नो मन मा, उहाँले सबै समय को सबैभन्दा ठूलो भन्दा कम केहि लागि बसोबास गर्न सक्षम हुने छैन. किन? उहाँले गहिरो इच्छा द्वारा संचालित किनभने सबै भन्दा राम्रो हुन.
सामान्यतया मानिसहरू संचालित भइरहेको कुरा गर्दा, तिनीहरूले यो जस्तै केहि मतलब. तिनीहरूले पेसा-उन्मुख भएका मानिसहरूलाई संकेत गर्दै हुनुहुन्छ, वा आफ्नो क्षेत्रहरू सफल गर्न कटिबद्ध. तर थप मसीही लागि संचालित भइरहेको त्यहाँ छ? हामी कस्तो संचालित छन् हुन र संचालित? के मसीही ड्राइभिङ गर्नुपर्छ र हामीलाई यो जहाँ ड्राइभिङ गर्नुपर्छ? खैर म हामी रोमी यो प्रश्नको जवाफ पाउन सक्छन् 12.
comprehensively बाहिर रोमी मा सुसमाचारको को धार्मिक शिक्षाले बिछाउने पछि 1-11, पावलले हामीलाई बताउन हामी कसरी अब बाँच्न गर्नुपर्छ उत्तेजित गर्दछ. पहिलो एघार अध्याय हामी विश्वास गर्नुपर्छ के भएको, हामी सुरक्षित छौं कसरी, के परमेश्वरले ख्रीष्टमा गर्नुभएको छ, परमेश्वरको ख्रीष्टमा के गर्नेछ, आदि. अब अध्यायमा 12, पावलले हामीले के गर्नुपर्छ के हामीलाई बताउन कुल पारी बनाउँछ. पावलले पनि एफिसी र कलस्सी यो गर्छ.
त्यसैले म हामीलाई यस खण्डमा हेर्न चाहनुहुन्छ, र हामी परमेश्वरको यहाँ प्रकट भएको छ के को प्रकाश मा के गर्नुपर्छ तीन कुराहरू हेर्न.
म यसकारण तपाईं अपिल, भाइहरूलाई, परमेश्वरको कृपाका द्वारा, एक जीवित बलिदानको रूपमा आफ्नो शरीर प्रस्तुत गर्न, पवित्र र परमेश्वरलाई स्वीकार्य, जो आफ्नो आध्यात्मिक उपासना छ. नगर्नुहोस् यो संसारमा conformed हुन, तर आफ्नो मन को नवीकरण द्वारा कायापलट, परीक्षण गरेर तपाईं परमेश्वरको इच्छा के हो बुझ्न सक्छ कि, के राम्रो र स्वीकार्य र सिद्ध छ. (रोमी 12:1-2)
म. दया संचालित हुन
त्यसैले पावलले यस पारी बनाउँछ जब, उहाँले हामीलाई अपील. उहाँले उत्कट pleads, उहाँले हामीलाई एक निश्चित तरिका बस्न authoritatively आग्रह. तर हामी हेर्न अघि के उहाँले हामीलाई के गर्न आग्रह, म उहाँले हामीलाई अपील बाटो हेर्न चाहनुहुन्छ.
म यसकारण तपाईं अपिल, भाइहरूलाई, परमेश्वरको कृपाका द्वारा… (रोमी 12:1एक)
हामी पावलले भन्न हामी सबैभन्दा ठूलो वा holiest हुन चाहनुहुन्छ किनभने "हामी एक निश्चित तरिका बाँच्न गर्नुपर्छ गर्दैन बाँच्न कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई बताउन,"वा किनभने" यो समाज को upstanding सदस्य बाँच्न कसरी गर्नुपर्छ छ,"वा, "हाम्रो आमा भन्दा हामीलाई राम्रो सिकाउनुभयो,"वा, "भनेर परमेश्वरले तपाईंलाई रुचि हुनेछ।" कुनै, उहाँले हामीलाई प्रेरणा एक फरक प्रकारको दिन्छ.
विश्वका द्वारा संचालित छ के को बीच एक विशाल भिन्नता छ, र के हामी द्वारा संचालित हुनुपर्छ. हाल म उनी र उनको साझेदार धेरै वर्ष पहिले सुरु व्यापार को भाग मालिक थियो जो एक महिला कुरा. त्यो व्यापार बारेमा मलाई भन्नुभयो र त्यो कसरी मेहनत गरे. त्यसपछि उनले थियो सबै बच्चाहरु बारेमा मलाई भन्नुभयो र त्यो तिनीहरूलाई कति प्रेम. र त्यो उनको जीवन त्यो सुरु व्यापार र आफ्ना छोराछोरीको बारेमा सबै बताए. र उसलाई प्राथमिक प्रेम रूपमा ती सङ्केत, र त्यो गर्छ भनेर सबै गरिरहेको लागि उनको प्रेरणा.
जस्तै राम्रो कुरा भन्न अब जस्तो देखिन्छ. त्यो उनको बच्चाहरु र उनको काम प्रेम. तर म मसीही गहिरो कुरा उत्प्रेरित गर्न छ भन्ने जान्न चाहन्छु. मसीही लागि हाम्रो प्रेरणा यस संसारमा केहि संग रोक्छ कहिल्यै. त्यसैले हामी गर्नुपर्छ प्रेम र हाम्रो बच्चाहरु को लागि प्रदान गर्न र हामी कडा परिश्रम गर्नुपर्छ र हामी पनि हामीले के काम प्रसन्न गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ. तर ती कुनै पनि हाम्रो अन्तिम प्रेरणा हुनुपर्छ. ती कुनै पनि हामीलाई ड्राइव गर्ने मुख्य कुरा हुनुपर्छ.
यहाँ पावलले आफूलाई बाहिर कुरा पोइन्ट र हाम्रो पार्थिव प्रेरणा लागि बस्छ. उहाँले हामीलाई अपील, हामी अरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ द्वारा, तर के गरेर परमेश्वरको पहिले नै हाम्रो लागि गर्नुभएको छ. उहाँ परमेश्वरको कृपाका द्वारा हामीलाई अपील.
त्यसैले जब पावलले परमेश्वरको कृपाका भन्छन्, उहाँले मन मा के हुन सक्छ?
पावलले महिमाको सुसमाचार परमेश्वरको सोच हुन सक्छ हामीलाई दिनुभएको छ. किनभने 1:16, पावलले यो सुसमाचार छ भन्छन्, "मुक्तिका लागि परमेश्वरको शक्ति, यहूदीका लागि पहिलो र त्यसपछि ग्रीक गर्न। "
वा उहाँले अध्याय चार सोच हुन सक्छ, जहाँ तिनी यसो भन्छन्, "तिनीहरू, जसका कुकर्महरू क्षमा गर्दै छन् धन्य, र जसका पापहरू ढाकिएका छन्; अनमोल कसको विरुद्धमा प्रभु आफ्नो पाप गणना हुनेछैन पुरुष हो। "
या शायद त्यो कहाँ तिनी यसो भन्छन् अध्याय पाँच सोचिरहेका गर्नुपर्छ, "परमेश्वरले हामी अझै पनि पापी ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो थिए कि जब हामीलाई आफ्नो प्रेम देखाउँछ।"
वा उहाँले अध्याय आठ उहाँले भनी बताउँछ जहाँ सोच हुन सकेन, "परमेश्वरले शरीरमा कमजोर व्यवस्था गर्न सक्ने के छैन गर्नुभएको छ. आफ्नै छोरा पठाएर…"
वा म त्यो अध्याय नौ को सोच हुन सकेन अनुमान, उहाँले हामीलाई यसो भन्छ जहाँ "भनेर मुक्तिको मानव exertion निर्भर गर्दैन, तर परमेश्वरले कृपा छ जसले "
म पावल यी सुन्दर सत्य सबै यहाँ मनमा परमेश्वरको कृपा विषयमा छ लाग्छ.
परमेश्वरले हामीलाई कृपा दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई कृपा दिने छ, र उहाँले हामीलाई कृपा दिनेछु. हामी उत्प्रेरित गर्नुपर्छ हामी पहिले देखि नै प्राप्त गर्नुभएको कृपा द्वारा मात्र, तर दया गरेर हामी प्राप्त.
र पावलले कृपा प्रकाश मा भन्दै छ, यहाँ तपाईं बाँच्न कस्तो छ. हामी उत्प्रेरित गर्ने हो, कि कृपा द्वारा संचालित.
त्यसैले हामी भोक द्वारा खान संचालित छन्, र केही अरू कसैलाई भन्दा कठिन काम गर्न ठूलो हुन इच्छा द्वारा संचालित छन्. त्यसैले यदि मसीही परमेश्वरको कृपाका द्वारा संचालित गर्न छ, के यी कृपाका तिनीहरूलाई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ?
द्वितीय. उपासना चालित हुन
एक जीवित बलिदानको रूपमा आफ्नो शरीर प्रस्तुत, पवित्र र परमेश्वरलाई स्वीकार्य, जो आफ्नो आध्यात्मिक उपासना छ। (रोमी 12:1ख-डी)
अब जब पावलले रोमी बलिदान रूपमा आफ्नो शरीर प्रस्तुत गर्न बताउँछ, उहाँले प्रयोग भाषा पुरानो नियमका उपासना र बलिदानको सिस्टम तिनीहरूलाई फिर्ता कुरा गर्न चाहनुभएको छ. त्यसैले भन्ने छोटकरीमा कुरा गरौं
एक. पुरानो नियमको पृष्ठभूमि
परमेश्वरको पवित्र छ. मानिस छैन. मानिस परमेश्वरको उपस्थिति मा हुन योग्य छैन वा कुनै पनि तरिकामा उहाँको दृष्टिकोण गर्न, तर परमेश्वरले पापीहरूको एक समूह पछि लाग्न पर्याप्त दयालु थियो, इस्राएलका, र तिनीहरूलाई उहाँको सम्बन्ध अनुमति दिन. तर उहाँले पवित्र छ किनभने तिनीहरूले पापी हुनुहुन्छ, तिनीहरूले केवल उहाँलाई कुनै पनि पुरानो तरिका दृष्टिकोण अनुमति सकिएन. तिनीहरूले मूर्तिहरू र झूटा देवताहरूको तिनीहरूले उपासना गर्दै थिए होला जस्तै तिनीहरूले उहाँलाई उपासना गर्न सकेन. तिनीहरूले परमेश्वरको उपासना गर्न जाँदै थिए भने यो उहाँको सर्तहरू हुन थियो. तिनीहरूले मात्र उहाँलाई उहाँले बाहिर राखे बाटो दृष्टिकोण र अनुमति सक्छ.
त्यसैले यी मानिसहरू प्रदान पछि, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञा दिए र तिनीहरूलाई उपासनाको लागि कडा निर्देशन दिए. एक बासस्थान निर्माण गर्न परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई बलिदानको सिस्टम दिनुभयो. उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूले उहाँलाई उहाँलाई र प्रधानमन्त्री उपासना सक्छ कसरी लागि कडा आदेश दिनुभयो. यो वध र जनावरहरूको बलिदान पुरानो नियमको उपासनाको एक विशाल भाग थियो. परमेश्वरको मान्छे को सबै परमेश्वरको दृष्टिकोण गर्न यी बलिदान पूरा गर्न आज्ञा दिइएको थियो.
यी बलिदान गरेर तिनीहरूले पाप स्वीकार र क्षमा लागि आवश्यक र बलिदान परमेश्वरको पवित्रता को तिनीहरूलाई सम्झाए. यी पशुहरू तिनीहरूले पाप गर्दा कि मान्छे देखाउन चाहनुभएको थियो, मृत्यु दण्ड छ. जनावरहरू तिनीहरूलाई सट्टा मृत्यु. बलिदान परमेश्वरको आज्ञाकारी बस्थे जीवनको एक भाग गर्न चाहनुभएको थियो.
त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरको पूरा गर्न सक्छ कि स्थान बासस्थान थियो (परमेश्वरको dwelled जहाँ एक सानो पाल) र पछि मन्दिर. पक्कै परमेश्वरको जताततै छ, तर यो उहाँले स्थापना के हो. उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मलाई उपासना सक्छ, यसरी, यो ठाउँमा. त्यसैले हामी एक जीवित बलिदानको रूपमा परमेश्वरलाई हाम्रो शरीर प्रस्तुत गर्न हो पावल यसो भन्छन् गर्दा, यो बलिको सिस्टम सम्झन गर्नुपर्छ.
साथै NT स्पष्ट बनाउँछ, यी बलिदान स्थायी हुन चाहनुभएको कहिल्यै थियो. तिनीहरूले परम बलिदानलाई कुरा गर्न चाहनुभएको थियो, येशूले. जनावर समान, भनेर सफा हुनुपर्छ, येशू हाम्रो पापको लागि सिद्ध बलिदान थियो. हिब्रू यो परम बलिदान पटक-लागि-सबै थियो भनेर हामीलाई बताउँछ. यो पटक-पटक गर्न कहिल्यै छ. उहाँले हाम्रो ठाउँमा उभिए, र उहाँले हामीलाई सट्टा मृत्यु. तर बलिदान जनावर विपरीत, येशू तीन दिन पछि अनुग्रह देखि गुलाब, हाम्रो शत्रु पराजित. येशूको आ त्यसैले, यो पुरानो बलिदानको सिस्टम गएको छ.
येशूको आउँदै सधैंभरि परमेश्वरको उपासनामा परिवर्तन. यो मेरो मनपर्ने उदाहरण को एक राम्रो तरिकाले मा महिला संग यूहन्ना चार अध्यायमा छ.
महिला उहाँलाई भने, "सर, म एक अगमवक्ता हुन् भनेर बुझ्ने. हाम्रो पुर्खाहरूले यो पर्वतमा उपासना, तर तपाईं यरूशलेममा उपासना गर्न जहाँ मान्छे गर्नुपर्छ स्थान हो भन्छन्। "येशूले भन्नुभयो उनको, "नारी, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो डाँडामा न त यरूशलेममा न तपाईं पिता उपासना गर्नेछन् जब घण्टा आउँदै छ. के तपाईं थाह के छैन उपासना; हामी हामी के उपासना, मुक्तिको लागि यहूदीहरू हो. तर घण्टा आउँदै छ, र यहाँ अब, साँचो उपासकहरू आत्मा र सत्यतामा पिता उपासना गर्नेछन् जब, पिता लागि उहाँको उपासना गर्न त्यस्ता मानिसहरूलाई खोजिरहेको छ. परमेश्वरको आत्मा छ, र उहाँको उपासना गर्नेहरूलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। " (यूहन्ना 4:19-24)
यो महिला ग्रहण भनेर येशूले यहूदी थियो किनभने, उहाँले मन्दिरमा यरूशलेममा उपासना गर्न उनको चाहन्थे. मन्दिर थियो, अहिलेको समयमा, परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूले उहाँलाई भेट्नुपर्छ अनुमति ठाउँमा. खैर येशूले स्पष्ट बनाउँछ आफ्नो मृत्यु संग, नयाँ समय आउँदै छ.
हामी अब बलिदान गर्न एक विशेष पशु संग एक विशेष ठाउँमा परमेश्वरको पूरा गर्न. हामी कहीं परमेश्वरले पूरा गर्न सक्छन्! येशूको मृत्यु संग, ती बलिदान टाढा संग गरिन्छ. येशू मात्र बलिदान छ, तर त्यो कहाँ बलिदान हुन्छ नयाँ मन्दिर छ. हामीले उपासना परमेश्वरको ख्रीष्टमा छ हुनुपर्छ ठाउँमा. बलिदान भएर साथै, र मन्दिर, येशूले हाम्रो प्रधान पुजारी छ. उहाँले परमेश्वरको हाम्रो बाटो हो.
त्यसैले, तपाईंले पुजारी आवश्यक छैन, वा जनावरको, वा परमेश्वरको उपासना गर्न एक भवन. तपाईं आवश्यक सबै येशूको छ! तपाईं आज यहाँ र के तपाईं येशू थाहा छैन भने, म पश्चात्ताप र विश्वास गर्न प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ.
-हाम्रो bodiesThe पद भन्छन् हामी हाम्रो शरीर प्रस्तुत गर्न हो. अब म हामी मात्र हाम्रो शारीरिक शरीर परमेश्वरको उपासना अर्थ लाग्छ छैन. म पावल मूलतः अर्थ लाग्छ, हामी आफूलाई भाग प्रदान गर्न छैन, तर माथि परमेश्वरको हाम्रो सम्पूर्ण स्वयं. हाम्रो सम्पूर्ण आत्म हामी प्रस्ताव गर्न सक्ने बलिदान छ. हामी हाम्रो जीवन प्रस्तुत गर्न हुनुहुन्छ, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो परमेश्वरको सबै.
त्यहाँ उपहार विभिन्न प्रकार छन्. y'all केही शायद हालै स्नातक र स्नातक उपहार पायो. आफूलाई मा समाप्त तिनीहरूले दिइएको केही उपहार हो, खेलौना जस्तै. कोही दिने सारा बिन्दु एक खेलौना तिनीहरूले खेलौना खेल्न सक्छन् भनेर छ.
त्यसपछि त्यहाँ उपहार को दोस्रो प्रकारको छ. यी उपहार अरू केही गर्न एक साधन रूपमा दिइएको. त्यसैले त्यहाँ बस स्नातक र उपहार रूपमा पैसा धेरै भयो भनेर यहाँ तपाईं को छन्. अब, तपाईं आफूलाई अन्त रूपमा ती मौद्रिक उपहार उपचार भने के? के यदि तपाईं चेक र वालपेपर रूपमा नगद प्रयोग? त्यो बर्बादी हुनेछ र दिनेलाई क्रोधित हुनेछ.
आफ्नो जीवन छ कि उपहार को दोस्रो प्रकारको. यो परमेश्वरको उपासनाको अन्त गर्न एक माध्यम हुन चाहनुभएको छ.
मसीहीको रूपमा, तपाईं उपहार को पहिलो प्रकारको कहिल्यै दिइनेछ. तपाईं प्राप्त हरेक एक उपहार, अर्को अन्त गर्न एक साधन रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुभएको छ. त्यो अन्त तपाईं आफ्नो जीवन परमेश्वरको उपासना भनेर छ.
ख. पवित्र र परमेश्वरलाई स्वीकार्य
पावलले यी जीवित बलिदान पवित्र र परमेश्वरलाई स्वीकार्य हुन हो भनेर भन्छन्. त्यसको मतलब के हो? पुरानो नियमका बलिदान संग, परमेश्वरको विशेष निर्देशन थियो. बलिदान लागि यो सफा पशु हुनुपर्ने थियो, व्यक्ति पश्चात्ताप र परमेश्वरको आज्ञा इच्छुक थियो, आदि.
हाम्रो लागि त, हामी जीवित बलिदान रूपमा आफूलाई भेटी हुनुहुन्छ. त्यसैले हामी आफूलाई दिन कसरी हो? परमेश्वरले मसीही बाँच्न अब कसरी लागि निर्देशन दिनुभएको छ. उहाँले हामीलाई उहाँलाई मनपर्ने हुनेछ जीवनशैली को प्रकारको भन्नुभयो गर्नुपर्छ. यदि हामी यो धेरै अध्याय बाँकी हेर्न, हामी देख्न पावलले कस्तो देखिन्छ रुपरेखा गर्न सुरु.
पद 3-8 उहाँले सम्पूर्ण शरीर को राम्रो को लागि आध्यात्मिक उपहार प्रयोग वार्ता. पद र 9-21 उहाँले रोमी एकअर्कालाई प्रेम गर्न प्रोत्साहन, र समग्र प्रत्येक अन्य अन्तरक्रिया गर्न तिनीहरू कसरी तिनीहरूलाई निर्देशन.
हामी पनि एफिसी यो हेर्न4जब पावलले शुल्क को यो नै तरिका दिन्छ. उहाँले एफिसी मा सिद्धान्त बाहिर कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग 1-3, र त्यसपछि अध्यायमा4उहाँले नै कुरा गर्छ. उहाँले तिनीहरू बाँच्न छन् तिनीहरूलाई कसरी बताउन सुरु.
एकताको लागि प्रयास गर्न उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्छन् र त्यो परमेश्वरले तिनीहरूलाई निकायको निर्माण अप खातिर विभिन्न उपहार दिनुभएको छ भनी प्रोत्साहन. अनि उहाँले एक अर्को निर्माण गर्न सँगै काम शरीर वार्ता.
सामुदायिक. म सहायता गर्न सक्दैन तर नोटिस कि दुवै रोमी र एफिसी मा, पावलले शरीर जीवन कुरा गरेर सुरु. तपाईं तपाईं गर्नुपर्छ रूपमा बलिदानको रूपमा आफ्नो जीवन प्रदान गर्न सक्छन्, अलग बाँचुन्जेल. परमेश्वरको चर्च बेवास्ता गर्न आफ्नो जीवन लागि परमेश्वरको इच्छा बेवास्ता छ.
उहाँले पद मा जान्छ 17-29 तिनीहरूले सिकाइएको गर्नुभएको के संग अनुसार छ र तिनीहरूले क्षमा गरिएको छ रूपमा क्षमा तरिकामा जीवन बिताउन तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न. अनि उहाँले अध्यायमा मा र जान्छ 5.
परमेश्वरले हामीलाई उहाँको जस्तै हुन भनिएको छ, जो पवित्रता अर्थ. उहाँले हामीलाई "म पवित्र हुँ रूपमा पवित्र हुन।" भन्नुभयो गर्नुपर्छ तर अक्सर हाम्रो जीवन पवित्र को विपरीत हेर्न. तर म तपाईंको लागि केही प्रोत्साहन छ…
"त्यसैले, कसैले ख्रीष्टमा छ भने, उहाँले एक नयाँ सृष्टि हो. पुरानो बितिसकेका छ; हेर, नयाँ आएको छ। " (2 कोरिन्थी 5:17)
तपाईं के आफ्नो अभिभावक बताउन बच्चा देखे भने तपाईं के थियो? वरिपरि आमाबाबुको आदेश एक घर वरिपरि Crawling? तपाईं तिनीहरू पागल थिए लाग्छ थियो! किन? तिनीहरूले आमाबाबु हुनुहुन्छ किनभने, तर तिनीहरूले बच्चा जस्तै अभिनय गर्दै. मान्छे केही शक्ति छ जब यो दुःखी छ, विशेषाधिकार तर तिनीहरूलाई हिंड्न इन्कार. यो एक मसीही पाप बस्न को लागि पनि crazier छ. जब परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित, हामी पुनर्जन्म थियो. परमेश्वरले हामीलाई ब्रान्ड नयाँ प्राणीहरू गरे. हामी यो अँगालेको छ. हामी धेरै अझै पनि बस पापी रूपमा आफूलाई विचार. हामी पापी हुन्, तर हामी पापी बढी छन्. के तपाईं बाइबल हामीलाई पापी कल देख्नु भन्दा तरिका थप, तपाईं हामीलाई सन्तहरू र परमेश्वरको छोराछोरी र एक शाही पुजारीको र जायज कल बाइबल देख्नुहुने.
जब तपाईं पाप, के तपाईं जो अहिले भइरहेको छैन. के तपाईं हुन प्रयोग गर्ने फिर्ता जाँदैछन्. तपाईं नयाँ नियममा पत्र पढ्न भने, तपाईं प्रेरितहरूको सधैं मसीहीहरूले आफ्नो पुरानो तरिका फिर्ता जा रोक्न बताउन छन् कि देख्नु. तिनीहरूले तिनीहरूले अब उप्रान्त छन् छैन जो छ भनी सम्झाएर छन्.
त्यसैले त्यहाँ यो कोठा वास्तवमा कसले आफ्ना आमाबाबुको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार मा कोही हुन सक्छ. परमेश्वरले तिनीहरूलाई पालन गर्न र तिनीहरूको पेश गर्न तपाईंलाई कल छ. त्यहाँ lustful विचार धेरै छ जो कोही हुन सक्छ. परमेश्वरले देखि बारी र मन शुद्ध हुन तपाईंलाई कल छ. त्यहाँ साँच्चै एउटा क्रोधित व्यक्ति छ जसले कसैले हुन सक्छ. परमेश्वरले तपाईंलाई मायालु र दयालु र क्षमाशील हुन कल छ. यो पर्याप्त छैन बस चर्च आउन छ. परमेश्वरले तपाईंलाई ख्रीष्टको जस्तै हुन कल छ.
अनि परमेश्वरले हामीलाई जीवन यी प्रकार बाँच्न शक्ति छ.
ग. व्यावहारिक सेवा
र पावलले अनुसार, उपासनाको यस प्रकारको हाम्रो उचित सेवा छ. के तपाईंले कहिल्यै ती चलचित्र कसैले अर्को व्यक्तिको जीवन बचाउँछ जहाँ देखेको छ र पछि तिनीहरू केवल तिनीहरूलाई हरेक दिन सबै दिन पालन? म्याट्रिक्स जस्ता 2. खैर परमेश्वरको कृपाका हाम्रो प्रतिक्रिया साथै मूल र चरम हुनुपर्छ.
तिमी मलाई एक डलर दिन भने म मुस्कान सक्छ, तिमी मलाई एक नयाँ शर्ट दिन भने म शायद आफ्नो हात मिलाउ छौँ, तिमी मलाई एक नयाँ पुस्तक प्राप्त गर्नुभयो भने म Hallelujah चिच्याउने सक्छ. तर तपाईं मेरो पापको मलाई उद्धार र मलाई unearned अनन्त जीवन दिने प्रतिज्ञा यदि, मात्र तर्कसंगत प्रतिक्रिया तपाईं मेरो सारा जीवन भेटी छ. त्यो मेरो उचित सेवा छ.
घ. जीवन को सबै
त्यसैले यो हामी संचालित हुनुपर्छ के छ. हाम्रो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको सम्म प्रस्ताव यो जीवित बलिदानको हुनुपर्छ.
हामीलाई केही शब्द परम्परागत अर्थमा संचालित छन्. हामी सफल गर्न चाहनुहुन्छ; हामी सीढी चढ्नु चाहनुहुन्छ. अनि त्यो एक राम्रो कुरा हो. तर के तपाईं पक्का राम्ररी पीस हुनुहुन्छ गर्नुपर्छ. तपाईं आफ्नो सफलता र स्थिति चिन्तित छन्? वा तपाईं परमेश्वरको उपासना चिन्तित छन्?
र तपाईं को लागि कसलाई पीस छन्? हामीलाई केही अत्यन्तै कठिन काम, र हामी हाम्रो आमाबाबुको अनुमोदन आवश्यक द्वारा संचालित हुनुहुन्छ. अथवा हामीलाई केही त हामी साथी को लागि राम्रो हेर्न पीसने. र हामीलाई केही काम कठिन बस आफैलाई खुसी पार्न. तर हेर्न हामी पीस हुँदैन र हाम्रो परिवार हाम्रो पीसने पेशकश, वा हाम्रो चर्च, वा आफूलाई. परमेश्वरको लागि हामी पीसने. हामी उहाँलाई हाम्रो सेवा को पेशकश गर्दै. तपाईं आफ्नो सेवा मुख्यतया कुनै एक परमेश्वरको भन्दा अन्य पेशकश गर्दै छन् भने, तपाईं मूर्तिपूजा दोषी छन्. परमेश्वरको उपासना, छैन मानिस वा केहि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ.
तपाईंले जे गर्न, heartily काम, प्रभु र मानिसहरू लागि रूपमा, प्रभु देखि तपाईं आफ्नो इनाम रूपमा उत्तराधिकार पाउनेछन् भनेर थाह पाउँदा. तपाईं प्रभु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छन्। (कलस्सी 3:23)
र पाठ्यक्रम यो भेटी लागि प्रेरणा परमेश्वरको कृपाका छ. हामी यस खण्डमा हेर्न तेस्रो कुरा हामी कायापलट गर्नुपर्छ भन्ने छ.
एक. के Conformed छैन
भाइबहिनीहरू हामी यो संसारबाट भनिन्छ गरिएको छ. पावलले "संसारको" यहाँ वार्ता गर्दा, उहाँले हामी बस्ने संसारको पार्थिव र दुष्ट तरिका बताइरहेका छ. उहाँले सञ्चालनको पापी मोड हामी हाम्रो वरपर सबै देखेर गर्न प्रयोग गरिरहनु भएको कुरा गर्नुपर्छ. अन्य अनुवाद "वर्तमान उमेर।" भन्न
हामी बाँच्न वर्तमान उमेर परमेश्वरको तिर विद्रोह छ. हामी धेरै अझै पनि हाम्रो मित्र रूपमा यस संसारमा केही मद्दत जो आवश्यकता विचार. पक्कै छैन. हामी हाम्रो शत्रु हुन यो उमेर को तरिका विचार गर्नुपर्छ. र हामी परमेश्वरको रूपमा हामी यस संसारमा र यसको तरिका उज्यालो हुन हो कि विचार गर्नुपर्छ, र हामी बचाउँछ भन्ने राम्रो समाचार प्रचार गर्न हो.
हामी संसारको प्रभावित हुन प्रयास छैन. यो केवल हुन्छ. तिनीहरू हामीलाई प्रयास बिना हाम्रो सोचाइ प्रभावित. यो एक राम्रो उदाहरण समलिङ्गीहरूले जस्तै तातो मुद्दाहरू छ. हामी अर्को राज्य हेर्न हरेक दिन समलिङ्गी विवाह अनुमति छ. र मिडिया, र बुद्धिजीवियों, र विचार नेताहरूले सबै समलिङ्गीहरूले को स्वीकृति लागि धक्का छन्. तिनीहरू हामीलाई ती सहमत र नैतिक रुख हाम्रो सम्झौता गर्न सबै pressuring छन्. र तिनीहरूले हामीलाई कुरा हुनेछ, हामीलाई खिसी, हामी सहमत नभएसम्म र bigots जस्तै हामीलाई व्यवहार. संसारको पुस बलियो छ. यो एक धेरै मजबूत वर्तमान छ. तर हामी वर्तमान संग फ्लोट छैन. परमेश्वरले वर्तमान विरुद्ध जान हामीलाई भनिएको छ.
समलिङ्गीहरूले सजिलो छ. स्वार्थ के, वा लोभ, वा गर्व? ती संसारको तरिकाहरू छन्, परमेश्वरको छैन. र हामी संसारलाई conformed गर्न सकिँदैन.
गरेको कलस्सी मा एक हेरौं 3. यो कहाँ पावलले बाहिर सुसमाचारको सिद्धान्त कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग अर्को पुस्तक हो, त्यसपछि फेरबदल र हामी को प्रकाश मा बाँच्न कसरी गर्नुपर्छ बताउँछ. त्यसैले पहिलो दुई अध्याय लागि पावलले गहिरो सामान भन्छन्, र त्यसपछि त्यो हामीलाई प्रभाव पार्नुपर्छ कसरी बताउँछ.
ख. तर तपाईंको मन को Renewing कायापलट
बरु विश्व गरिरहेको छ के conformed भइरहेको को, हामी कायापलट गर्नुपर्छ. अनि हामी कायापलट छन् भनेर बाटो हाम्रो मन को Renewing हो.
तिनीहरूलाई अलग बस्न को लागि उहाँले तर्क छ, परमेश्वरको गर्नुभएको छ के आधारमा…
परमेश्वरले हामीलाई कायापलट गर्न चाहन्छ. र यो कि परिवर्तन जस्तै देखिन्छ के छ. यो मृत्यु राख्दै जस्तो देखिन्छ के हामीलाई पार्थिव छ, र परमेश्वरको विशेषताहरु मा राख्दै.
ग. तपाईंको मन Renewing
तर हामी कसरी कायापलट र ईश्वरीय विशेषताहरु धारण गर्न सकिन्छ. पावलले स्पष्ट भन्छन्, "तपाईँको मन Renewing द्वारा।"
हामी जस्ता सामान सुन्न रुचि छैन. तर हाम्रो मन नविकरण गर्नुपर्छ. हाम्रो सोचाइ हाम्रो गर्दै ड्राइव, र हाम्रो सोचाइ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ. म तपाईंलाई भन्न गर्दा जस्तै मतलब छैन, "म सही गर्न मानिन्छ छु थाहा, तर…"कुनै भनेर परिवर्तन गर्न आवश्यक पापी सोच छ. हाम्रो शरीरमा वर्तमान संग जा तिर leans र अवसर पाप गर्न लागि यो देखिन्छ. र आफ्नो शरीरमा मात्र संसार र शैतानको द्वारा शह छ.
हाम्रो मन प्रत्येक दिन नवीकरण गर्न आवश्यक. हामी यो कसरी गर्छन्? हामी निरन्तर हामीलाई अगाडि सोचाइ परमेश्वरको राखेर हाम्रो मन नविकरण. दैनिक हामी हाम्रो हृदय देखि झूट पछि झूट पछि झूट सुन्न, र दुनिया, र शैतानको. ती झूट लड्न हामी नितान्त परमेश्वरको सत्य आवश्यक.
घ. परमेश्वरको इच्छा समझदार
यो परिवर्तन को लक्ष्य परमेश्वरको इच्छा समझदार गर्न सक्षम रहेको छ. परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको इच्छा एक्लै उहाँलाई प्रसन्न भएको एक जीवन तपाईं सक्छ. उहाँले असल र स्वीकार्य र सिद्ध रूपमा परमेश्वरको इच्छा वर्णन हेर्न. तपाईं आफ्नो मन नविकरण रूपमा, र अनुभव कायापलट जीवन, तपाईं परमेश्वरको वचन को भलाइ हेर्न सक्षम हुनेछ. र तपाईं यसलाई जीवन र उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन तपाईं निम्त्याउँछ हेर्न सक्षम हुनेछ.
म पहिलो पटक वचन मलाई मारा सम्झना. म देखि नै भएको कहिल्यै गर्नुभएको.
त्यसैले हामीलाई केही तीतो र क्षमा नदिने भएका छन्. त्यो सांसारिक छ. के तपाईं संसारको तरिका गर्न अनुकूल छन्. त्यहाँ हामीलाई केही कामुकतालाई भरिएका छन् र यौन अनैतिकता भाग छन् जो छन्. त्यो सांसारिक छ. के तपाईं संसारको तरिका गर्न अनुकूल छन्. त्यहाँ हामीलाई केही पृथक छन् अझै पनि छन्. हामी एक चर्च को भाग छैनन्, त्यसैले हामी शरीर निर्माण आफूलाई हाम्रो उपहार राखेर र छैन. बरु हामी केवल आफूलाई निर्माण. त्यो सांसारिक छ.
हामी ती सांसारिक तरिका देखि चालु गर्नुपर्छ, र हाम्रो मन को Renewing द्वारा कायापलट. र यदि हामी कायापलट हुनेछ, हामी परमेश्वरको इच्छा को भलाइ देख्ने.
ठूलो बास्केटबल खेलाडी हुन हामी Aspire सक्नुहुन्छ मसीहीहरूले, वा ठूलो राजनीतिज्ञ, वा ठूलो Rappers. तर आफूलाई ती कुराहरू हामीलाई ड्राइव के हुन सक्दैन, र तिनीहरूले हामी संचालित हुनु हुँदैन अन्ततः के हुन्. तपाईं पार्थिव कुराहरू र पार्थिव सफलता को लागि खेलकुद भने, तपाईं कम गर्न खेलकुद छन्.
हामी परमेश्वरको कृपा द्वारा संचालित गर्न छन्, परमेश्वरको उपासना गर्न संचालित, र हामी उहाँको वचन द्वारा कायापलट गर्न हो. गरेको प्रार्थना गरौं.
PhillipBavilla • अप्रिल 16, 2014 मा 3:11 बजे • जवाफ
म बस थियो भन्ने प्रवचन मनपराएका, वा गरे वा जब तपाईं सत्य कुरा छ. म पढेर थियो, म थोडे देखेको भनेर आफैलाई गरिरहेको धेरै कुराहरू देखेका, तर म कहिल्यै एक्लै यो गरिरहेको थियो, ख्रीष्टले मात्र तरिका हो, यूहन्ना जस्तै 14:6, र समस्याहरूको जब वरिपरि आउन, ख्रीष्टको म कहिल्यै चाहिन्छ भनेर मात्र बल हो, पावलले Philipians मा उल्लेख रूपमा 4:13. तर म केहि थोडे यो सुसमाचारको र्याप सामान लागि कुरा मिल्यो, र म कुनै पनि अवस्थामा उहाँलाई लागि बोल्ड हुन ख्रीष्टले संचालित भइरहेको छु, संसारमा यसको कि, वा परमेश्वरको हाउस यसको हुनुको प्रवचन वा भक्ति गर्दै कि. म साहस लागि प्रार्थना, र IM रोगी हुन मेरो सबैभन्दा गरिरहेको.
liam • अगस्ट 19, 2014 मा 7:14 बजे • जवाफ
अति उत्तम, उत्कृष्ट पोस्ट यात्रा. एम आउँदै राख्न र नयाँ एल्बमको लागि पम्प्ड
लरेन्स • अगस्ट 27, 2017 मा 8:42 बजे • जवाफ
सधैं चुनौती. धन्यवाद.